🥇 ▷ Sida loo soo celiyo iPhone leh macruufka 8.0.x - 8.1 adigoon lumin Jailbreak ✅
Sida loo soo celiyo iPhone leh macruufka 8.0.x – 8.1 adigoon lumin Jailbreak
Waxaa hadda suurtagal ah in la soo celiyo iPhone-ka oo leh macruufka 8 ama wixii ka sareeya iyada oo aan laga badin Cydia iyo Jailbreak
Haddii aad haysatid iPhone leh Jailbreak oo aad u baahan tahay inaad soo celiso aaladdaada adigoo aan lumin Cydia iyo Jailbreak, laga bilaabo maanta waa suurtagal inaad ku mahadsan tahay nooca cusub ee SemiRestore. Waan arki doonaa hadda sida loo soo celiyo iPhone leh macruufka 8.0.x / 8.1 adigoon lumin Jailbreak.
Habka caadiga ah marka ay timaado soo celinta iPhone-ka ayaa ku qabanaya iTunes, laakiin waxaan hore u ognahay in haddii aan dib u soo celino aaladdayada iOS qaabkan, waxaan waayi doonnaa Jailbreak, waxaan ku soo celinaynaa waddankiisii ​​hore. Nidaamkan waa “qatar” kuwa aan dooneynin inuu lumiyo Jailbreak ama ugu yaraan suurtagalnimada inuu sidaas sameeyo, maxaa yeelay kiis ahaan in nooc ka mid ah qalabka ‘iOS’ ee aan ku habboonayn Jailbreak la heli karo, sida kiiska oo kale ah of iOS 8.1.1, waxaan waayi karnaa suurtogalnimada inaan mar labaad sameyno, inkasta oo hadda ay suurtogal tahay in laga soo dejiyo macruufka 8.1 ilaa iOS 8.1, nooca ugu dambeeyay ee macruufka la jaan qaada Jailbreak.
Qodobkaan waxaan ku arki doonaa sida loo soo celiyo iPhone leh macruufka 8 ama wixii ka sareeya iyada oo aan laga badin is-jabsigaNidaamkani wuxuu si cad u ansax u yahay dhammaan aaladaha la jaan qaadaya nooca ugu dambeeyay ee nidaamka hawlgalka mobilada ee Apple iyo is-dhaafsiga.
Shuruudaha si loo soo celiyo iPhone-ka iyadoo la adeegsanayo macruufka 8 iyadoo aan laga badin Jailbreak-ga
Si loo raaco hanaankan waxaan ubaahanahay inaan ku haysano agabkeena kombuyutarka ‘SemiRestore8’ (Si aad u soo dejiso). Waqtigan xaadirka ah kaliya waxaa loo heli karaa kombiyuutarada leh nidaamka hawlgalka Windows XP SP3 ama ka sareeya iyo Ubuntu 12.10, mid ka sareeya ama nooc u dhigma Linux, nooca la jaan qaada kombiyuutarada leh OS X 10.6 ama ka sareeya ayaa weli socda oo la heli doonaa dhowaan.
Talooyin muhiim ah ka hor intaadan soo celin iPhone-ka iyadoo aan lumin Jailbreak
Ka hor intaadan raacin hanaankan waxaa lagu talinayaa in aan tixgelinno waxyaabo qaar.
Waxaa lagugula talinayaa in aad uninstall Aaladda Cydia Mobile Substrate, si aad xaqiiqdi uga bixi karto Badbaadada oo aad uga fogaato dhibaatooyinka.
Hubso inaad sameysay gurmad ka hor intaadan fulinin nidaamka si aad u awoodo inaad haysato xogtaada ka dib marka dib loo soo celiyo.
Ka fogow adeegsiga barnaamijyada sida iTunes ama XCode inta lagu gudajiro nidaamka ‘SemiRestore8’.
SemiRestore8 ma lumiyo ama soo celiyo faylalka nidaamka.
Kaliya waxay suurtagal noqon doontaa in lagu soo celiyo nooca iOS ee aan hadda ku haysanno aaladda.
Si loo socodsiiyo hawshan daruuri maahan inay lahaato shahaadooyinka APTickets iyo SHSH
Tilmaanta si loo soo celiyo iPhone leh macruufka 8 ama ka sareeya halka aad dayactireyso Jailbreak
Si loo raaco nidaamka si loo soo celiyo iPhone-ka iyadoo la adeegsanayo macruufka 8.0.x / 8.1 iyadoo aan lumin Jailbreak-ga waa inaan:
Fur faylka ‘SemiRestore8’ oo horey loo soo degsaday lagana heli karo miiska kombiyuuterkeena.
Midig-guji halka ‘Semi-Restore iCono’ ama riix furaha CTRL oo guji badhanka, ka dibna dooro Fur.
Mar haddii SemiRestore8 la bilaabay, dhagsii «Furan» si aad usii waddo howsha.
Gali eraygaaga sirta ah haddii la codsado ka dibna guji ok.
Ku xir iPhone-ka iOS 8 ama wixii ka dambeeya kombiyuutarka oo guji badhanka ‘SemiRestore’.
IPadku wuu bilaabi doonaa SemiRestore8 ayaa bilaabi doonta inay soo celiso.
Marka SemiRestore8 uu dhammeeyo nidaamka waxaad arki kartaa digniin uu sameeyay barnaamijka ka dibna aaladda dib ayaa loo bilaabi doonaa.
Sidaas ayaad ku guuleysan doontaa soo celi iPhone, iPad ama iPod taabashada firmware ee macruufka 8 iyadoo aan lumin Jailbreak, markii la dhammeeyo qaabeynta bilowga ah ee qalabka waxaan ka heli karnaa Cydia oo lagu rakibay shaashadda bilowga.